Giriiga oo bixin waayey lacagtii IMF ku lahayd
Home Somali News Giriiga oo bixin waayey lacagtii IMF ku lahayd
Wadanka Giriiga ayaa ku guuleysan waayey inuu bixiyo lacagtii gaareysay 1.6 Bilyan oo ahayd deyntii ay ka heleen hay’ada IMF. Giriiga ayaa heystay illaa xalay saqdii dhexe inuu lacagtaasi bixiyo.
Balse wadanka Giriiga ayaa sheegay inuusan heyn lacag ku filan oo ay isaga bixiyaan deynmaha, arrintan ayaa saameyn ku yeelaneysa taageeradii dhaqaale oo uu dalka Giriiga ka heli jiray beesha Caalamka.
Dowlada Giriiga ayaa sheegtay inay u baahan tahay deynmo dheeraad ah oo ay isaga bixiyaan kharashaadka xukuumada iyo waliba bangiyada dalkaasi. Xukuumada Giriiga ayaa Bangiyada dalkaasi xayiraad saaray inaysan lacagtooda kala bixin shacabka oo ka walaacsan dhaqaale xumada ka jirta wadankaasi.
Maanta oo Arbaco ah ayuu Bangiga Dhexe ee Midowga Yurub ka shirayaa codsi ah in lacago dheeraad ah lasiiyo dalka Giriiga. Balse wadamada ugu muhiimsan ee deynta kuleh Giriiga oo uu ugu horeeyo dalka Germany ayaa sheegay in marka hore eegayaan natiijada Aftida Giriiga Axada soo socota u qaadayo inay kasii mid ahaadaan Midowga yurub, taasina ku xirnaan doonto wadahadalka deynmaha mustaqbalka danbe lasiin karo wadankaasi.
Dalalka Midowga Yurub ayaa ka walaacsan dhaqaale xumada ka jirta dalka Giriiga oo saameyn ku yeelan kara dhaqaalaha guud ee wadamada Midowga Yurub oo horey dhaqaale badan u geliyey dalka Giriiga lacagtaasi oo deynta ahayd ayaa illaa iyo hada la bixin.